Infographic: Mustaqbalka Wadaagista Faylka Kadib Xiritaanka Megaupload | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Naqshad, GNU / Linux, Kuwa kale
Charles cross, sarkaalka saxaafadda ee PortalProgramas.com, Waxaan shalay noo soo diray emayl, halkaas oo uu noogu sheegay inay abuureen xog ku saleysan mustaqbalka qeybsiga feylka kadib xiritaanka Megaupload.
Marka loo eego farriinta Carlos, isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay ku ogaadaan, kaliya 30 ilbiriqsi, furayaasha xiritaanka Megaupload iyo mustaqbalka wadaagga faylka:
- Taariikhda aasaasihii Kim Schmitz
- Miisaanka Megaupload ee Net-ka
- Ra'yiga warbaahinta VS rayiga dadka isticmaala
- Yuu noqon doonaa saamaynta soo socota iyo beddelka Megaupload
Runtii aad iyo aad u wanaagsan oo waxtar leh infographic. Waxaad uga tagi kartaa faallooyinkaaga ku saabsan xiriirkan:
Waxaa lagu daabacay liisanka Creative Commons si loogu faafiyo shabakada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Naqshad » Infographic: Mustaqbalka Wadaagista Faylka Kadib Xiritaanka Megaupload
Waxaan rajeyneynaa in adeeg kale uu soo baxo sidaa darteedna waxaan daawan karaa anime, ma ahan qosolka anime ee carruurta ay dhigteen Spain
Midka soo socda: S
Hagaag, waxba ma dhici doonaan, waan sii wadeynaa isticmaalka p2p iyo maalinta ay na xakameynayaan p2p, dhamaanteen waan isticmaali doonaa vpn iyo adoo dhahaya
Waxaan u maleynayaa in durdurrada jira - iyo in ka sii badan hadda, in dad badani u wareegeen iyaga-, cidina ma waayi doonto Megaupload. Waxaad ka heli kartaa wax kasta oo ku dhow oo aad wadaagi kartaa.
Mmmmmm Ma garanayo haddii aan waxtar lahayn ama waxa laakiin haddii wax laga helo iyadoo la isticmaalayo togag si loo soo dejiyo wax ka mid ah 2gb waxay igu qaadataa 15 maalmood oo caadi ahaan 6 ama 7 saacadood ah. 🙁
Waxay u badan tahay arrinta dekedaha, ama xitaa barnaamijka aad isticmaasho. U fiirso qbittorrent, waa sida ugu dhakhsaha badan ee aan ogahay, in kasta oo had iyo jeer lagaa rabo inaad ku hagaajiso faahfaahinta yar yar xulashooyinka.
Faa’iido darrada ay p2p leedahay ayaa ah inaad ku tiirsan tahay inaad kombiyuutarrada kale shidnaato, iyadoo barnaamijku u socdo isla markaana ay hayaan feylkii aad raadineysay.
Dhammaan dacwadahaas uu Mr. East sheegay, inbadan baa leh "waa lagu eedeeyay", "waa lagu eedeeyay", laakiin ma dhihi doono haddii dambi la'aan ama dambiile ay soo baxeen, maxaad u qarineysaa macluumaadkaas? kuma haboona in la ogaado?
maalmahan mid ayaa dambi ah ilaa iyo inta caksigeeda aan la caddayn, kiiska megaupload waa tusaale cad
tallaabada xigta ee ugu weyn waxay noqon doontaa in la xiro bittorrent, sidee se u yeeli doonaan? maaddaama aan faylasha durdurrada aanad waxba qabanayn, fudud, xidho websaydhada martigeliya faylasha la yidhi, maaddaama macmiilku ka hooseeyo uusan haysan mashiin raadin isku dhafan
cadawga ugu dambeeya ee ugu dambeeyaana wuxuu noqon doonaa shabakada edonkey, oo halkaas ka sii dhib badnaan doonta, halkii aan macquul aheyn waxaan dhihi lahaa, ilaa dadka adduunka oo dhan ay xabsi galaan mooyee
malaha taasi waa ujeeddada, in nala wada xiro, inbadan baa naga badan, oo waxaa jira kaliya lacag afar bisadood ah, inta soo hartay waxay ku qurmayaan xabsiga PIRACY
aan la magacaabin digxit:
Dhammaan tijaabooyinkaas oo dhan ee sayidkan lagu xusay wuxuu lahaa,
in badan ayaa leh "waxaa lagu eedeeyay", "eedeynteed", laakiin ma dhigo
Haddii dambi ama dambiile soo baxay, maxaa loo qarinayaa macluumaadkaas?
Miyeysan ku habboonayn in la ogaado?
Dabcan waa muhiim in la ogaado, laakiin nasiib daro kiisaska oo dhan isaga ayaa la maxkamadeeyay laguna helay dambi (http://es.wikipedia.org/wiki/Kim_Schmitz)
Su’aashaydu waxay tahay, dadka isticmaala ma run ahaantii "Waxaan sii wadi doonaa inaan bixinno kaliya waxa aan jecel nahay" sida lagu sheegay infographic? Runtii ma bixinay ... mise waxbaan qaadanay?
Waxaa jira dad aad u tiro badan oo la xukumay oo waqtigaas ay horay u bixiyeen xukunkooda, anigu ma arko dhibaatada jirta haddii ay iyaguba bixiyeen. Waxa aan shaki ka qabo waa dimuqraadiyadda Mareykanka iyo run ahaanshaha eedeymaha.
Waxaan ka tagayaa degel loo sameeyay si aan ugu biiro dhamaanteen kuwa raba inaan warbixin u gudbiyo masuuliyiinta Waqooyiga Ameerika.
pandev Waa hal shay in qofku bixiyo xukun iyo wax kale oo ah in dhaqancelin lagu sameeyo ... dhibic-com waa khayaamo lagu xukumay sedex jeer arimo musuqmaasuq hadana waa kii afaraad, ma sheegan karno inuu yahay qof qalad galay oo uu ku bixiyay xabsiga.
Isagu waa kan ay tahay in la cambaareeyo oo aan ahayn FBI...
Waxaan tixgelinayaa in Megaupload, sida shirkadaha kale ee adeegga la midka ah, ay uga faa'iideysteen fursad ahaan iyo faa'iido ahaanba, laakiin aan ku bixin kharashka maqalka iyo barnaamijyada softiweerka, laakiin malaayiin isticmaaleyaal ah (qaar badan oo ka mid ah iyaga oo aan raadineynin dano shaqsiyeed) oo wadaagay faylasha iyo waxyaabaha dijitaalka ah ( dhammaan noocyada) iyo malaayiin kale oo badan oo marin u leh waxyaabaha la sheegay.
Si kastaba ha noqotee, kuma faraxsani uguyaraan xiritaanka megaupload, laakiin maahan xaqiiqda luminta fursadda aan ku soo dejisan karo ama aan ku arki karo filim (tusaale ahaan), laakiin hamiga fisqi iyo dano dhaqaale-siyaasadeed oo dhiirrigeliya ficillada sida ama dadaallada sharciga sida ACTA, SOPA
ama PIPA (oo wata calanka munaafaqadda ee lagu difaacayo xuquuqda qoraaga iyo abuurista).
Waxaan ku raacsanahay in barnaamijyada nooca P2P ay mar kale soo kacayaan (oo hadda aad uga sarreeya wixii ay haysteen sannado ka hor markii tirada dadka leh marinka internetka iyo xawaaraha ballaadhku ahaa, labada xaaladoodba, aad uga hooseeyay).
Ma aqbalyo burcad badeednimada ama taraafikada sharci darrada ah, laakiin waxaan oggolahay xuquuqda in la wadaago iyada oo aan laga joogsan aqoonsiga qorayaasha, iyo wixii ka sarreeya, xuquuqda aqoonta, macluumaadka iyo dhaqanka, iyada oo aan xaddidneyn oo aan ka sarreynin dan ganacsi.
P2p wuxuu leeyahay wax aad u fool xun, uguyaraan Spain taasna waa in hawl wadeenka ugu awooda badan, telefonica.movistar esau, uu daboolo p2p xitaa hadii ay dhahaan oo ay cadeeyaan si kale, isla waxay ku dhacdaa oranji iyo vodafone. Midka kaliya ee la keydiyaa waa jazztel.
Jazztel waa shit, waxaan kuu sheegayaa inaan hayo
Soo degsashada tooska ahi waxay noqotay mawjad aan caalamiyo gaar ahi oggolaan karin. Dhowr nuts ayaa la adkeeyay oo megaupload ayaa la baabi'iyay. Ma loo qiil yeelan karaa inay dembi ka dhigaan qalabka? Faylasha lagu martigeliyay megaupload waa la sheegi karaa waana la tirtiray markii ay jabinayeen sharciyada. Haddii Mr. DotCom uu xabsiga u aado dambiyo uu galay, si wanaagsan ayaa loo qabtay. Laakiin qalabka laftiisu wax dambi ah kuma laha. Marka ha helin difaac aad u badan oo xuquuqda daabacayaasha ah, P2P laguma maquuniyo kharibayaasha waaweyn iyo kuwa bidaarta leh. Waxaan ka baxayaa arrintan Halkan.
Arrinta Megaupload, aakhirkii, waxay soo baxday inay ku qasban tahay inay sameyso Megabox, ama sidaas ayay u muuqataa. Habka looga gudbo dhex-dhexaadiyaasha iyo in farshaxan-yahannadu ay si toos ah u iibiyaan hal-abuurkooda, iyagoo 90% ka qaadaya faa'iidooyinka. Sidee ayay warshaduhu ugu oggolaan kartaa taas? Aynu xusuusano inay tahay isla warshaddii halkii ay ka bixin lahayd rukhsadda shirkadda Edison qalabka duubista filimada, ay go'aansadeen inay u cararaan California, taas oo ah, ka dhuumashada sharciga si ay u sameeyaan waxa ay rabaan ...
Waxaan u maleynayaa in Megaupload ay heystaan ​​sababo ku filan oo ay ku dhaqmaan. Intaa waxaa dheer, warshaduhu waxay gacanta ku hayaan xuquuqda lahaanshaha. Iyadu waa cidda mas'uulka ka ah inay subagto EGDPI / Dawladaha, sida ay wax u socdaanna farshaxanno waaweyni waa maxaabiis ku jira baqashada dahabka (iyo xoogaa farxad-gal ah oo lacag ku dhex wareegaya). Waxaa laga yaabaa in Megabox ay sabab u ahayd in hadda la sameeyo, maxaa yeelay DotCom waxay rabtay inay nadiifiso meheraddeeda iyadoo taabatay sanka shirkadaha madadaalada ee caalamiga ah.
Adiga oo aan ka warqabin, warshadda ayaa laga yaabaa in ay adkeyso guntinta qoortaada. Ficillada noocan ah waxay kicisay falcelinno qaab boodbood farsameed ah. Laga soo bilaabo xiritaanka napster ilaa megaupload, wax walba wey sii fogaadeen. Isticmaalayaashu waxay noqonayaan kuwo madaxbannaan, warshaduna waa mid sii kordheysa oo aan awood lahayn maadaama ay ku dadaalayso inay ilaaliso ganacsiga qarnigii XNUMXaad qarniga XNUMXaad.
Waxaa sidoo kale jira xaqiiqda ah in, haddii ay tirtiraan dhammaan server-yada noocan ah, maxay u noqon laheyd lagama maarmaan in qandaraas lagu sameeyo isku xidhka 50 mega? Toban meelood meel waxay umuuqataa in kabadan intabadan.
Waxaas oo dhan, maaha in la xuso in adeegsadayaashooda ay ku suntan yihiin dambiilayaal iyo maxaabiis dabargoyn ah ... waa hagaag, waan arki doonaa cidda baabi'isa cidda.
Ogolaanshaha iyo xuquuqda Linux